ANTENIMIERAM-PIRENENA : Depiote tsy miankina 21 nanangana vondrona parlemantera iray
Solombavambahoaka miisa 21 avy amin’ny tsy miankina no nivondrona ao anatin’ilay vondrona parlemantera repoblikana (GPR) ary nanambara fa hanao arofanin’ny Antenimieram-pirenena etsy Tsimazaza, omaly. 22 juillet 2019
Araka ny nambaran’ny filohany, tsy hiandany fotsiny amin’ny fanohanana ny fitondram-panjakana izy ireo ary tsy hanohitra be fahatany ihany koa fa hijery izay hahasoa ny firenena ary hametraka ny hampiharana ny demokrasia eo anivon’ity andrim-panjakana ity. Tsy momba ny atsy na ny aroa ny tanjon’izy ireo, raha ny fanazavana.
Vonona hifampiresaka amin’ireo solombavambahoaka maro an’isa avy amin’ny vovonana isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina (Ird) ihany koa izy ireo ary hifanankalo hevitra amin’ny birao maharitra mahakasika ny fandaniana lalàna eto amin’ny firenena.
Tsiahivina fa efa nisy ihany koa teo aloha, solombavambahoaka tsy miankina maherin’ny 20, nanao fanambaràna fa hanohana tsy misy fepetra ny Filoha Andry Rajoelina ary hanatevin-daharana ny vovonana Ird. Ireto farany dia nanambara fa “tsy ilaina ny manangana vondrona parlemantera etsy sy eroa raha tena te hampandroso ny firenena, fotokevitra no ilaina, ny fananganan’ireo solombavambahoaka tsy miankina vondrona hafa ivelan’ny vondrona efa misy no nahatonga ny kolikoly nanjaka tao amin’io antenimiera io satria lasa manao sotrobe lava taho ireo avy amin’ny tsy miankina ireo ka sady mahay atsy no mahary aroa”, hoy ny fanambaràn’ny solombavambahoaka tsy miankina, nanohana tsy misy fepetra ny Ird, tafaresaka taminay.